ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseFrance I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNdawo engabonakaliyo
Ukuqala, ubizwa ngokuba "Hunskelper". Sikunika ingxelo epheleleyo yeMbali yoMntwana uMoussa Dembele, iBali leBali, amaNqaku oSapho, abazali, ubuNtwana, ubuNtu, ubu bomi kunye neminye imisitho ephambili ukusuka xa wayengumntwana ukuya kuthi ga xa athandwayo.
Ubomi kunye nokuvuka kweMoussa Dembele yaseFransi. Ityala elinomfanekiso EzemidlaloMole, Orenji, Instagram kwaye Leparisien
Ewe, wonke umntu uyazi Unetalente egqwesileyo, umbongi onolwazelelelo oluhle lokuhlaselwa, imeko yokuma kunye neliso lenjongo. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biology kaMoussa Dembele enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UMoussa Dembele wazalwa ngomhla we-12th kaJulayi 1996 njengomntwana wesibini kubazali bakhe ePontoise, umanyano kumantla asentshona eParis, eFrance. Abazali bakhe babefudukele kunye nemvelaphi yosapho eya kwilizwe laseNtshona Afrika iMali.
UMoussa Dembele ozalelwe eFransi, unosapho lwakhe oluvela eMali
Bobabini abazali, xa bahlala ilizwe labo kwi-1990s yokuqala badibana eFrance kwaye batshata kwilali encinci yasePontoise, emantla eParis. I-Pontoise yindawo ephantsi yeParis ihlala ibonwa njengendawo yokuhlala kunye neziko lokudibanisa usapho kubafuduki baseMaliya abalishiya ilizwe labo lisiya eFrance. Ubusazi?… Abafuduki abaziwayo baseMaliyali kule ndawo babandakanya iintsapho ze Moussa Sissoko kwaye N'Golo Kanté.
UMoussa Dembele akakhulelanga kwimvelaphi yosapho enobutyebi. Kanye njengoKante, Utata wakhe kunye nomam babefana nabantu abaninzi abasebenza imisebenzi ephantsi kodwa bengazange bafumane eyona mfundo ibalaseleyo yemali, amaxesha amaninzi bezabalazela imali. UMoussa Dembele ukhulele kwilali encinci kumantla eParis ecaleni kukadadewabo ogama lingu-Dembiz Balla kunye nomdala ongumdala ongaziwayo kakhulu ngaye.
UMoussa Dembele wakhula kunye nodadewabo uSin. Ityala elinomfanekiso Instagram
Njengomntwana omncinci, uMoussa Dembele wayegcinwe kakhulu, owayedla ngokushiywa ekuhlaleni. Akabikho kwimisebenzi emininzi njengabanye abantwana kwindawo yakhe yasePontoise. Endaweni yokuntywila ngokudlala nabahlobo, uDembele kungcono ame ngasemva abukele lo mntwana kubandakanya udadewabo omkhulu nomntakwabo. Ngenxa yesi sizathu, akafumani kumakhaya abahlobo eyedwa rhoqo.
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Njenge N'Golo Kanté, umlingane wakhe uMaliya onobuntu obunentloni, ukudlala ibhola waba ngumthombo wokuzithemba kunye nendlela kaDembele yokubaleka kude kwizinto eziyinyani ebomini bakhe.
Ngombulelo, phambi kwabadlali bebhola ekhulileyo kunye nabudala bakhe, uDembele wafunda indlela yokuphuma, isibindi nokuzithemba njengoko ebonisa iimpawu ezintle ngebhola. Naxa ndandisesikolweni, wayeya kudlala ibhola ngexesha lokuphumla kunye neeyure zemidlalo. Ngakumbi, ngeholide, uDembele wayedlala ibhola phantse yonke iiyure kusasa nasemva kwemini.
Akuzange kuthathe xesha ngaphambi kokuba uDembele azi ukuba unethalente lokulenza lifane neli pro. Ukushukunyiswa yimpumelelo yabafuduki abamnyama kwikomityi yehlabathi yeFrance 1998, waqala ukuphupha esebenzisa ibhola njengendlela yokulwa nobunzima nokuphakamisa imeko yakhe yosapho. UDembele uxubushe ngamabhongo akhe notitshala wakhe wesikolo abamkhuthaza ngakumbi ngokuthi- Ukuzinikezela kwakhe kwezemidlalo yayilutyalo-mali olwaluya kuthi ngokusebenza nzima kunye nokuzimisela kumncede aphumelele ekubeni ngumdlali webhola oqeqeshiweyo.
Ngosuku oluthembekileyo emva kweeklasi zesikolo, uMoussa Dembele waya kumasimi asePontoise apho wamenyelwa kwityelelo lokuya kubamelwane. Emva kwetumente awayeyenze ngokugqwesileyo, iindaba ngaye zaya kwiklabhu yakhe yengingqi. Ulonwabo lwayo yonke usapho lwayo aluzange lube nayo imida njengoko wabizwayo ukuba aye kuzilingo yiklabhu yakhe yasekhaya, u-Cergy Clos wase-US.
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ubomi bokuqala
Ukufumana ulingo kunye neklabhu yase-US Clergy Clos - eyayingelula njengoko kuvakala. Kuthathe umzamo womntakwabo Mousa Dembele ukuba angenelele ngaphambi kokuba bamvavanye. Ngamazwi akhe, ngokutsho FourFourTwo;
“Xa umntakwethu wayezama ukujoyina, bathi abamfuni. Ukuba sele benabadlali abaninzi kakhulu ukuba babakhathale. Kodwa umntakwethu unyanzelisile: 'Mane umnike iseshoni yoqeqesho enye kwaye yile'… Benza njalo kwaye abazisoli. ”
UMoussa Dembele waba yinxalenye ye-US Cergy Clos yebhola ekhatywayo eneminyaka eyi-6 emva kokuphumelela kunye nabo ngo-2002 ngonyaka. Emva kokujoyina iklabhu, wanyanzelwa ukuba adlale indawo engaphambili kwaye kwangoko, waqalisa ukuqaqamba ebaleni.
Ekupheleni komdlalo ngamnye, uDembele wayengumntwana onokuthi ngamanye amaxesha aphulukane nokubalwa kweenjongo zakhe. Wayengumntu ofumana amanqaku endalo kwaye wayehlala kwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo. Ukuthandwa kwakhe akuzange kuqatshelwe yiPSG emva kokufumana amanqaku amaninzi kwiCergy Clos yase-US. Emva kwexesha lebhola le-2003 / 2004 lebhola, unciphise phambili uthathe amanyathelo alandelayo kwibhaso lakhe eliselula eqhubeka nenkqubo yokuvuthwa kwebhola ekhatywayo kunye nemfundo yolutsha yaseParis Saint-Germain FC
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Indlela eya kwiNdaba ibali
UMoussa Dembele uqhubekile nokuhamba isikolo nangona wayebizwa yiPSG. Ugqibe isikolo sakhe samabanga aphantsi ngaphambi kokuba abhalise I-Le Moulin eVent Collège, ibekwe eCergy, indawo engummandla okumantla asentshona-ntshona weParis.
KwiPSG, uMousa Dembele uqale kwicala le-U15 kwisizini ye2010-2011. Iimpawu zakhe ezintle zokukhawuleza kunye nokugqiba kwakhe wambona efaka amanqaku e-40 kwimidlalo ye-30, inani eliphawulekayo elashiya ootitshala bakhe benomdla kakhulu. Kwi-2012, uDembele kunye neqela lakhe; Kingsley Coman, Presnel Kimpembe kwaye Adrien Rabiot (Yonke imifanekiso ebonisa apha ngezantsi) bakhethelwa ukuthatha inxaxheba kwiAl Kass Cup eDoha.
Ifoto enqabileyo yabaphumelele i-U17 PSG ye-Al Kass Cup kwi-2012. UMoussa Dembele wayekunye noRabiot, Coman, Ongenda, Kimpembe, Maignan noDembele. Ityala elinomfanekiso Leparisien
Kolu khuphiswano, umhlaseli waseFransi wazibalisela kaninzi ngokufumana amanqaku azinzileyo, kubandakanya ukufaka amanqaku ngokuchasene neBarcelona. Amandla kaDembele wokufumana amanqaku ngokuncedisa iqela lakhe ukuphumelela Indebe yeAl Kass eDoha emva kokudiliza iJuventus ekugqibeleni.
Xa i-Going is Tough: Phantse ekuqaleni kwe-2012, kwafika amarhe okuba kuthathwe i-PSG kwaye ihlaziywe ngabanini bebhiliyoni entsha (Utyalomali lweMidlalo yeQatar). Le rheum yajika yenzeka ngeenxa zonke ngoMatshi wonyaka. Okulusizi kukuba uMoussa Dembele wayephakathi kwabo bafumana ireyithi eninzi, zange banikwe indawo yeqela lokuqala emva kokufumana isidanga. I-PSG yayinomdla wokuthenga kuphela imipu emikhulu- ukuthanda uku Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Kevin Gameiro njalo
KAKHULUUDembele, ngaphandle kokunceda iklabhu iphumelele i-Al Kass Cup ehlonelwayo AKUKHO nto ikwazile ukuyenza kwiqela lokuqala lePSG. Umdlali okhathazekileyo uthathe isigqibo sokuhlala kwiklabhu yakhe yasekhaya emva kokuziva indlela yakhe yomsebenzi sele uvaliwe phantsi kobunini-mali obukwi-Qatar Sports Investment.
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ukunyuka Kwidumo Ibali
UMoussa Dembele uthathe umngcipheko oyingozi ekuqaliseni ulutsha phesheya. Kwiminyaka ye-16, wajoyina icandelo lesiNgesi kwi-2, eFulham apho watyhila khona inkcubeko entsha, iindlela zoqeqesho kunye nemikhwa. Njengesiqhelo kwiqela leFulham U18, ukusebenza kukaDembele kumbona ephumelela imbasa yePremier League League kwisizini yakhe yokuqala kunye neklabhu.
UMoussa Dembele esenza amanqaku kunye noFulham njengoko waphumelela imbasa yeBhola yeBhola ekhatywayo yoMdlali oMncinci. Ityala elinomfanekiso BBC
Ukunyuka kweembasa zikaDembele kwiNdawo yaseFulham eCraven kuboniswe kwicala lesizwe lase-U-21 kwaye kwakhokelela ekubeni aphumelele iFrance Under-21 Player yebhaso lonyaka. Ukudlulisela ukubonelelwa kulandelwa kungekho xesha emva kokufumana imbeko. Kuzo zonke izinto ezinikezelwayo, ezo zeCeltic zaba namandla njengoko uDembele waba nguBrendan Rodgers okokuqala esayina kunye neklabhu.
Ukuhamba usiya esipalini saseNyakatho kwenye indlela enobungozi kaDembele uqhubeke urhwebo lwebhola kwiPremier League, iligi engaziwayo kubalandeli bebhola. UMoussa Dembele wadlala indima ebonakalayo kwiCeltic ngexesha leChampions League, kubandakanya ukufaka amanqaku ngokuchasene neManchester City (amanqaku okugqibela 3-3) kumanqanaba eqela.
UMoussa Dembele unyamezele ukunyuka okukhulu ngokufumana amanqaku kwiMan City kwi-Champions League. Umfanekiso weTyala- iHailhailmedia
Ukuqala isizini emva komlingane weqela uLeigh Griffiths, umFrentshi wazimisa njengomdlali wokuqala kaBrendan Rodgers, wenza iinjongo ze-19 - ezintlanu zeza nxamnye neRanger (iimbaleki ezinkulu zeCeltic). Iinjongo zikaDembele (Iinjongo ze-32 kwimidlalo ye-49 kubandakanya ukubuyela umva kwitreyini) khokela iqela liphumelele i-2018 / 2019 yeTreble yabo yokuwina ngexesha lokuphumelela. Le mpumelelo yabona abalandeli bemthiya njengeqhawe.
Ngexesha nje le-1 neCeltic, Moussa Dembele 3 trophies kwaye wafumana amanqaku e-32. Ityala elinomfanekiso Twitter
Ukuphumelela iTreble wabona uDembele ezazisa ngendlela enkulu kwiiklabhu zaseYurophu. Kwi-31st ka-Agasti 2018, umbethi we-6-unyawo wagqiba kwelokuba abuyele kwilizwe lakhe, ngoku atyobele iklabhu ye-Ligue 1 iLyon.
UTSHINTSHO LWEXESHA: UMoussa Dembele walinda ukuba aziphindezele kwi-PSG kwaye loo mzuzu ekugqibeleni wangaphantsi kweenyanga ze-6 zokujoyina iLyon. Abanye babalandeli bePSG, ukubukela amanqaku eqela elichasayo nabo kuyinxalenye yomdlalo. Kodwa ukubona uMoussa Dembele (owayedlala nabo ngaphambili) amanqaku IDELISIWE bobabini abalandeli kunye nabadlali. UMoussa Dembele wabhiyozela ngokuchasene neklabhu yakhe yakudala eyakha yabonisa ukungakholelwa kuye.
UMoussa Dembele wayenembuyekezo kwi-PSG, ebeka umgcini wegoli ukuba alale kwaye athule zonke iiklabhu zemali ezinkulu ezityalomali. Ityala lemifanekiso FourFourTwo
Ngokuqinisekileyo lo mnikelo uye wamhlawula kakuhle uDembele ukusukela ngexesha lakhe eLyon. Ukusukela emva kokuphindezela kwiPSG, yaqhubeka neyakhe Ukunyuka kwesimo sezulu, imbonakalo emenze ukuba abe yenye yezona ndawo zishushu kwibhola yaseYurophu. Ukunyuka kukaDembele eLyon kunokuthelekiswa tu noko Karim Benzema kwaye Alexandre Lacazette Ngoobani abadala bakhe baseLyon baseFrance.
UMoussa Dembele Ukunyuka ukuya kudumo lweBali leMifanekiso yeeMbali: Bonakalisa, I-360nobs kwaye Twitter
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ulwalamano lobomi
Ngayo yonke impumelelo esiyifumene kule minyaka idlulileyo, kuyacaca ukuba abalandeli bebhola kufuneka ukuba bacamngci Inokuba ngubani intombi kaMoussa Dembele. Akukho nto iyiphikayo into yokuba imbonakalo yakhe entle / emhle edibene nendlela yakhe yokudlala ayizukubeka yena kuluhlu oluphezulu lonqwenela lwenkwenkwe nganye.
Abalandeli benze imibuzo malunga nokuba intombi kaMoussa Dembele isenokuba ngubani na. Ityala elinomfanekiso Instagram
Emva kophando oluninzi kwi-intanethi, Kubonakala ngexesha lokubhalwa, uMousa Dembele wenze umzamo wokuqonda ukuba ngubani na intombi yakhe okanye inkosikazi yakhe (Oko kukuthi, ukuba sele utshatile). Okanye inokuba akatshatanga, into leyo ethetha ukuba ubukho be-WAG abukho.
Siyazi ngamanye amaxesha ibhola inokuxolelwa ngakumbi xa kuziwa kukuxuba nemicimbi yobudlelwane. Ngesi sizathu, kungenzeka ukuba uMoussa Dembele uthanda ukugxila kwimisebenzi yakhe kunokukhangela intombi yakhe eqhelekileyo okanye umntu oza kuba ngumfazi.
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ubomi bomntu
Ukwazi uMoussa Dembele Iinkcukacha zoBomi bakho kuya kukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngobuntu bakhe.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, uMoussa Dembele wazalwa eneentloni kwaye ethule kodwa kamva wafumana izizathu zokutshintsha umbono wakhe ebomini njengoko wayekhula eba nesibindi namandla. Ibali lakhe lempumelelo alizanga ngaphandle kwedini. Kuyo yonke le minyaka, uDembele uye wangqina abalandeli bebhola ukuba unokukwazi ukuziqhelanisa lula namandla azingqongileyo, njengoko ebebonile kwiihambo zakhe kulo lonke elaseNgilani esiya eScotland. UMoussa Dembele uyakwazi ukubona ikamva kwaye uyazi kakuhle into ayifunayo, indawo awayekuyo kunye nezinto awayezakube esenza iminyaka emihlanu okanye elishumi ukusukela ngexesha lokubhala.
Kwelinye iphepha lobomi bakhe bobuqu, uMoussa Dembele uyazithiya izithembiso ezaphukileyo njengoko wayekhe walixhoba kulo ngelixa wayefunda kwiPSG. Ngenxa yalonto, ngoku unegama lokubukela elihamba ngokulandelayo;
Indoda ngaphandle kwelizwi lakhe ayonto (akukho mntu).
Ukwazi uMoussa Dembele uBomi baBantu kude neBhola ekhatywayo. Ityala lesithombe kwi Twitter
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - yokuPhila
Ngexesha lokubhalwa, uMoussa uhola i- € 48,000 ngeveki. Le yimali eninzi, yanele ukuba aphile ubomi obungaqhelekanga. Nangona kunjalo, egweba kwizikhundla kwii-akhawunti zakhe zeendaba zentlalo, uMoussa Dembele Unobuchule bokulawula imali yakhe kunye dUkuhlala phakathi kokusebenza kunye nolonwabo okwangoku akuyondlela inzima kuye. Akukho zibonakaliso zeemoto ezinokhakhayi, mansions, boozes, ladies njl.
Ubomi bukaMoussa Dembele- Yena ngexesha lokubhala akaphili ngaphandle. Credits: Gym4you
Kwindlela yakhe yokuphila, uMoussa Dembele ngumntu oqhele ukuzifumana kwinkampani yabantu abahlukileyo. Elinye ixesha elineentloni nelizolileyo umfana ngoku uzibona efuna ukuba ngowokuqala kuyo yonke into-ukusuka emsebenzini ukuya kwiindibano zokuzonwabisa.
Indlela yokuphila kaMoussa Dembele- Unobuhlobo kwaye ngoku ufundile ukuba kunye nabahlobo. Ityala lemifanekiso: Instagram
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Ubomi Bentsapho
Impumelelo yosapho luka-Moussa Dembele ibotshelelwe kuye (umondli wesonka) ngokuyenza ebholeni. Ngexesha lokubhalwa, amalungu osapho lakwaDembele basebenzise iindlela zokujongana nodumo oluthi luza nelinye losapho lwabo baphumelele.
Ngexesha lokubhalwa, konke amalungu osapho (umam, utata, umntakwethu, udadewethu, njl. njl.) aphatha impumelelo kaMoussa ngokuphila ubomi babucala kunye nobuphantsi baseFransi nangona i-paparazzi ihlala iphambuka kunye neendlela ezininzi zokunxibelelana neendaba zentlalo. Ngelixa abazali bakaMoussa Dembele kunye nomntakwabo banalo iphepha leendaba zentlalo engaziwayo, loo dadewabo umdala uyafikeleleka kodwa wabeka ngasese (Ngexesha lokubhalwa) ukuze abalandeli abagunyazisiweyo babone kuphela izinto azabelana ngazo.
UMoussa Dembele Dade une-akhawunti yakhe ye-Instagram yabucala ukuze abalandeli abavunyiweyo kuphela babone ukuba yintoni ayabelana ngayo
I-Moussa Dembele Ibali leBantwana kunye neNgcaciso ye-Biography Facts - Inyaniso engekho
I-DNBX yeDNBX ebalaseleyo (10): Akusezindaba zangoku ukuba kukho abantu abambalwa bebhola kunye nesibongo 'Dembele'. Igama 'Utyhafile'ithandwa kakhulu phakathi kwebhola ekhatywayo lwasentshona Afrika Intsapho, ikakhulu ivela kwilizwe laseMali. Kule seshini, sibeke i-10 ye-Dembeles ebalaseleyo kumdlalo.
Ubomi beBogger obeka i-10 yeyona Dembeles intle yeBhola yeHlabathi yeBhola ekhatywayo kufuneka inikezele. IiCredits: Barcablaugranes, EzemidlaloMole, I-Mercato365, injongo, 90Min, IGrimsby kunye ne-Twitter
Babandakanya i-1: 1 - Ousmane DembeleI-2-eyethu uMoussa Dembele, i-3 - UMousa Dembele, I-4 - iKaramoko Dembele, i-5 - iMana Dembele, i-6 -I-Siriki Dembele, i-7-iMalaly Dembele, i-8 - iBira Dembele, i-9-iMahamadou Dembele kunye ne-10-Aliou Dembele.
Amagqabantshintshi e-eyeball: Ku-Moussa Dembele, ukugcina amachaphaza akhe eqhelekileyo ngexesha elinzima kwimidlalo yebhola phantse akunakuphepheka. Oku kunxulumene kakhulu UPhil Jones ' imbonakalo yobuso kumaxesha afanayo.
Ukuqokelelwa kweMoussa Dembele Amehlo esiso. IiCredits Zemifanekiso: ilanga, EzemidlaloMole, I-Mercato365, I-Skysports kunye ne-Twitter
Ukuchazwa kweBiological kuMoussa Dembele AmehloUkuxinzezeleka kweamehlo akhe kubangelwe sisenzo sokukwenza ngokuzimeleyo okubandakanya unxibelelwano lwenzala kunye nokusilela kwemisipha. Oku kwenzeka kuphela kumaxesha anzima kwimidlalo yebhola.
QHUBEKA: Ndiyabulela ngokufunda iMoussa Dembele Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology leMoussa. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
ILyon yeDlalo yeDlalo
I-Sebastien Haller Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts